Nhau - Chipfeko chepolymer chinotonhora zvivakwa
Kupfeka kwepolymer kunotonhora zvivakwa
Mainjiniya akagadzira yakakwira-inoshanda yekunze PDRC (pusa masikati machena kutonhodza) kuputira kwepolymer nemipengo yemhepo inotangira kubva kumaanometer kusvika kumaminiscels ayo anogona kushandiswa senzvimbo inotonhorera yemhepo kumatenga edzimba, zvivakwa, matangi emvura, mota uye kunyange spacecraft - chero chinhu chinogona Ivo vakashandisa solution-based phase kutendeuka michina kupa iyo polymer inogumbuka furo-senge chimiro Kana ichinge yaburitswa mudenga, iyo inoputika polymer PDRC kupfeka kunoratidzira mwenje wezuva uye unopisa kuti uwane matembiricha akaderera pane zvakajairika zvekuvakisa kana kunyange ambient mhepo.
Nekuwedzera kwetembiricha nemafungu ekupisa ari kukanganisa hupenyu pasi rose, kutonhodza mhinduro kuri kuramba kuchikosha Iyi inyaya yakakosha, kunyanya munyika dzichiri kusimukira, uko kupisa kwezhizha kunogona kuve kwakanyanya uye kunotarisirwa kuwedzera Asi nzira dzakajairika dzekuporesa, senge mweya kugadzirisa, kunodhura, kushandisa simba rakawanda, kunoda mukana wekugadzirira magetsi, uye kazhinji kunoda kutonhodza ozone kana kutonhora-kupisa.
Imwe nzira yeaya masimba-akanyanya kutonhora nzira ndeye PDRC, chinoitika icho nzvimbo dzinotonhorera zvega nekuratidzira mwenje wezuva uye kupisa kupisa kune inotonhorera mamiriro. Kana iyo nzvimbo ine iyo yezuva ratidziro (R) inogona kudzora kuwedzera kwezuva kupisa kwezuva, uye ine mwero wepamusoro wekushisa kwemhepo (Ɛ) inogona kuwedzera denga rekupisa kupisa kurasikirwa, iyo PDRC inoshanda zvakanyanya.Kana R uye Ɛ yakakwira zvakakwana, kunyangwe kana kurasikirwa kwekupisa kwemambure kuchiitika muzuva.
Kuvandudza zvinoshanda PDRC dhizaini kunonetsa: dzakawanda dzichangoburwa dhizaini dzakaomarara kana dzinodhura, uye hadzigone kushandiswa zvakanyanya kana kuiswa pamatenga edzimba nezvivakwa zvine akasiyana maumbirwo uye mavara.Sezvo parizvino, zvakachipa uye zviri nyore kushandisa pendi chena chave chiri chiratidzo chePDRC. Nekudaro, machira machena anowanzove ane pigments ayo anopinza ultraviolet mwenje uye haaratidze iwo marefu marefu ezuva rezuva zvakanaka, saka mashandiro avo ane mwero chete.
Columbia Injiniya vaongorori vakagadzira yakakwira-inoshanda yekunze PDRC polymer yekupfeka ine nanometer-kune micron-chiyero mweya maburi ayo anogona kushandiswa seanongoerekana anotonhorera emhepo uye anogona kuvezwa uye kupendwa padenga remba, zvivakwa, matangi emvura, mota, uye kunyange nzvimbo dzechipenga. - chero chinhu chinogona kupendwa Ivo vakashandisa solution-based phase kutendeuka maitiro ekupa iyo polymer inogumbuka furo-senge chimiro Nekuda kwemusiyano mune refractive index pakati pemhepo void neyakaipoteredza polymer, mweya unobuda mu porous polymer Iyo polymer inochenesa uye nekudaro inodzivirira kudziya kwezuva, nepo kubereka kwayo kwakabvumidza iyo kunyatsoburitsa kupisa mudenga.